NT, Author at NepalTrending - Page2of 8
आज नेपालमा मात्र १२ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
No Comments on आज नेपालमा मात्र १२ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं : कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप १२ सय ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोनाबाट कुल संक्रमितको संख्या ६२ हजार ७९७ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३३३ को पिसीआर परिक्षण गरिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ४७ जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सम्म कोरोना संक्रमण निको भएकाहरुको संख्या ४५ हजार २६७ जना रहेको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संगै नेपालमा मृतकको संख्या ४०१ पुगेको छ ।
चिनियाँ सैनिकले गरे ठुलो भारतिय भुमि कब्जा , भारतिय सेना निरिह
No Comments on चिनियाँ सैनिकले गरे ठुलो भारतिय भुमि कब्जा , भारतिय सेना निरिह
एजेन्सी, ३ असोज । चीन-भारत सीमामा चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकले गस्ती गर्ने १० भन्दा बढी स्थान कब्जा गरेका छन् । भारतीय समाचार माध्यमहरुका अनुसार चिनियाँ सैनिकहरुले चीन भारत सीमा क्षेत्रको पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको सीमामा भारतीय सैनिकले गस्ती गर्ने स्थानहरु कब्जा गरेको हो ।
समाचार अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)मा गस्ती गर्ने भारतीय सेनालाई सो सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । यसबारे भारतको अंग्रेजी पत्रिका ‘द हिन्दू’ले प्रकाशित गरेको खबरमा छ ।
उसका अनुसार उत्तरमा डेपसाङ्ग मैदानदेखि दक्षिणमा प्याङ्गोङ्ग तालसम्मका १० वटा पेट्रोलिङ्ग प्वाइन्टमा चिनियाँ सैनिकका कारण भारतीय सैनिक सीमा क्षेत्रमा गस्ती जान सकेका छन् । भारतीय सैनिकहरु गत अप्रिलदेखि नै ९, १०, ११, १२, १२ ए, १३, १४, १५, १७ र १७ ए पेट्रोलिङ्ग प्वाइन्टमा गस्ती गर्न नपाएको भारतीय समाचार माध्यमहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु, मृतकको संख्या ४०१ पुग्यो
No Comments on नेपालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु, मृतकको संख्या ४०१ पुग्यो
काठमाडौँ : कोरोना संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृ’त्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्या’न गुमाउनेको संख्या ४०१ पुगेको छ । यसअघि शुक्रबार (हिजो) ७ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएको थियो ।
शुक्रबार मोरङ र काठमाडौँका २/२, ललितपुर, भक्तपुर र नवलपरासीका १/१ जनाले ज्या’न गु’माएका थिए । बिहीबार कोरोनाका कारण नेपालमा ४ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । त्यसअघि बुधबार कोरोनाका कारण ८ जनाको मृ’त्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो ।
त्यसैगरी गत मंगलबार ११ जनाको कोरोनाका कारण ज्या’न गएको थियो भने सोमबार एकैदिन १५ जनाले कोरोनाका कारण ज्या’न गुमा’एका थिए । मन्त्रालयका अनुसार गएको आइतबार भने कोरोनाका कारण ९ जनाले ज्या’न गुमाएका थिए । गत शनिबार १४ जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको थियो । कोरोनाकै कारण गएको शुक्रबार ५ जनाको कोरोनाले मृ’त्यु भएको थियो ।
कुलमान घिसिङ भन्छन: ‘महामारीको बेला मेरो पक्षमा सडक आन्दोलन नगर्नुस’
No Comments on कुलमान घिसिङ भन्छन: ‘महामारीको बेला मेरो पक्षमा सडक आन्दोलन नगर्नुस’
काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नाममा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका छन्। चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
उक्त विरोध प्रदर्शनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कुलमानले नेतृत्व परिवर्तन हुनु नियमित प्रक्रिया भएको बताए। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार नेपाल सरकारसँग भएको भन्दै कोरोना महामारीको बेला विरोध प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
“प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित भएकाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुने नै छ,” जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण नेपाल पनि आक्रान्त भएको बेला आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखी महामारीको संवेदनशील अवस्थामा सडकमा भीडभाड गरी प्रदर्शन नगरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कुलमानले भदौ २९ गते बिदा भएका थिए। उनको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। काठमाडौंमा जारी प्रदर्शनमा प्रहरीले भने बल प्रयोग गर्दै आएको छ। जसका कारण केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भन्छन् : कुलमान एक्लैले लोडसेटिङ हटाएका हैनन्
No Comments on परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भन्छन् : कुलमान एक्लैले लोडसेटिङ हटाएका हैनन्
काठमाडौं, असोज २ : सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमानलाई पुनः नियुक्ती गर्ने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।
भारतले भन्यो: सम्बन्ध सुधार्न नेपाललाई दुई वटा रेल दियौँ, नेपाल भन्छ हामी रेल किनेका हौ’
No Comments on भारतले भन्यो: सम्बन्ध सुधार्न नेपाललाई दुई वटा रेल दियौँ, नेपाल भन्छ हामी रेल किनेका हौ’
काठमाडौं- नेपालले भारतसँग ८४ करोड रुपैयाँमा दुई वटा रेल किनेको र शुक्रबार मात्र ति रेल नेपाल आइसकेका छन् । नेपालमा रेल सेवा बन्द भएको वर्षौंपछि रेल आउँदा नेपालीहरू अत्यन्त खुसी भएका छन् । तर सधै जस्तो नेपाल र नेपालीको खुसीमाथी खेल्ने भारतले नेपाललाई दुई वटा रेल दिएको बताएको छ ।
भारतीय रेलमन्त्रीले शुक्रबार नै ट्वीट गर्दै दुई वटा रेल दिएको बताएका हुन् । उनले गरेको ट्वीटको आशय नेपाललाई सित्तैमा रेलहरू दिएको भन्ने लाग्छ ।नेपालमा शुक्रबारमात्रै आएका दुई वटा रेलका तस्विरहरू सहित सेयर गर्दै भारतीय रेलमन्त्री पियुष गोयलले नेपाललाई दुई रेल दिएको र यसले नेपालसंगको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने ट्वीट गरेका छन् । तर, यी रेल नेपाल सरकारले भारतसँग किनेको हो ।
रेलमन्त्रीले नै नेपाललाई भारतले दुई वटा डेमु रेल दिएको बताएपछि नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र सीमा विवादका कारण भारतप्रति चिसिएको नेपालीको मन झनै कुंडीने देखिएको छ ।
भारतीय रेलमन्त्री गोयलले नेपालसँग भारतको प्राचिन, साँस्कृतिक तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको र सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिँदै भारतीय रेलवेले नेपाललाई दुई रेल दिएको बताएका हुन् । ६ वर्षभन्दा अगाडि बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेलवे पुनः सन्चालनमा आएको हो । यसका लागि नेपालले भारतसँग ८४ करोड रुपैयाँमा यी दुई रेल किनेको हो ।
No Comments on मलमासमा झुक्किएर पनि नगर्नुस् यी काम…. अन्यथा हुनेछ ठुलो हानी
काठमाडौं-हिन्दू परम्परानुसार मलमासको अवधिमा शुभ कार्य गर्न नहुने धर्मशास्त्रका विज्ञले बताएका छन् । बिहीबार अपरान्ह ४ः५९ बजेदेखि शुरु भएको मलमास असोज ३० गते राति १ः५३ बजेसम्म रहनेछ । सो अवधिमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
मलमास अर्थात् अधिकमासमा नित्य कर्म पूजा, पाठ, जप, ध्यान गर्नुहुन्छ। नित्य बसिरहेको व्रत गर्नुहुने विभिन्न शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए। पहिल्यैदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिन हुने तर नयाँ व्रतको शुरुआत् गर्नु नहुने नियम छ।
मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्यअर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृहनिर्माण, गृहप्रवेशजस्ता गर्नु हुँदैन। यसैगरी गर्भाधान गर्नुहुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नुपर्छ भन्ने परम्परा पनि गर्भाधान गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामै आधारित रहेको धर्मशास्त्रविद्को भनाइ छ। बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने जति कर्म मलमासमा पनि गर्नुहुँदैन।
नेपालमै जन्मिएका भगवान रामको दर्शन गर्दै हेर्नुस आजको राशिफल ! सधै शुभ हुनेछ ! असोज ०३ गते । शनिबार
No Comments on नेपालमै जन्मिएका भगवान रामको दर्शन गर्दै हेर्नुस आजको राशिफल ! सधै शुभ हुनेछ ! असोज ०३ गते । शनिबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुने तथा पुराना कारोबारहरुलाई सल्टाउने समय रहेको छ । सत्रुले दुख दिन खोजे पनि अन्तत उनीहरुलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावलि पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । बिवाद तथा न्यायिक निर्णयहरुबाट हुने सुनुवाई तपाईकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिद्धन्द्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिए पनि लगनशीलताले बिस्तारै प्रगति हुनेछ। बौद्धिक कार्यबाट थोरै भए पनि लाभ हुनेछ। व्यावसायिक काम बीचमा अवरुद्ध बन्न सक्छ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामहरुलाई निरन्तरता दिनुहोला । चाहदा चाहदै पनि घरायसी सुख सुबिधाहरु प्रयोग गर्न नपाउँदा मन खिन्न हुनेछ । काम बिग्रने हुँदा राजकीय सम्मान पाउँने योग टरेर जाने तथा राजनीतिमा प्रतिश्पर्धिहरु हावी हुनेछन् । छातिमा देखिने समस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । घर परिवार तथा साथिहरुबाट टाडिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा असहज महशुस हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरि फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिश्पर्धिहरु परास्त हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गरि गन्तब्य भेटाउन सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकि हरुसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ भने आफन्तसँग गरिने व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानि हुने ग्रहयोग रहेकोछ । उत्पादित उद्योगमा लगानि बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) समयमा काम गर्न सकिने भएपनि नतिजाको लागि केहि समय कुर्नुनै पर्नेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग अनाबस्यक बिषयमा बिवाद हुने तथा टाडिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । बोल्दा ख्याल गर्नुहोला बोलिको गलत अर्थ लगाई आलोचना गर्ने सक्रिय हुनेछन् । पढाई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । होटल तथा रेष्टुरेन्टको व्यावसायबाट सामान्य आम्दानि भएपनि अन्य व्यावसायमा मन्दि आउनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक क्षत्रे बलियो हुनेछ । माया प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । सुख दुखमा साथ दिनेहरु प्रशस्त भेटिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा बिक्रि घट्न सक्छ भने बिदेशि सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छि गर्नेबानिले कामहरु बिग्रन सक्छ । अनाबस्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिनेछैन । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पतिहरु लाभ हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । ईच्चा आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरु बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवसर आउँनेछ । सरकारि धन तथा पैत्रिक धन सम्पति हात लागि हुने सम्भावना रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) पैत्रिक कामबाट मनग्गे लाभ लिन सकिने तथा पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने योग रहेकोछ । नया काम पाउने तथा नोकरिमा उच्च पद प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । लक्ष्य प्राप्तीको लागि चालिने पाईलाहरु सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्नेछन् । पढाई लेखाई अरुभन्दा एक कदम अगाडि नतिजा ल्याउन सकिनेछ । प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) धार्मिक कार्य तथा परोपकारमा मन जानेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभव हुनेछ। खराब आचरण भएका व्याक्तिहरुले फसाउने तथा केही बाध्यात्मक परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा काम बिग्रनेछ । धार्मिक क्षेत्र तथा परोपकारी काममा सहभागि भई काम गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिर्य घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । लामो समय देखिको प्रेममा अबिश्वास बढ्न सक्छ । पढाई लेखाईमा समय दिन नकस्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । आफन्त तथा दिदिबहिनीसँग बिवाद सिर्जना हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा आम्दानी बढाउन निकै नै समय खर्चनु पर्नेछ । खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा रहने हुनाले नयाँ–नयाँ काम गर्ने जोस जागर बढेर आउनेछ । व्यापार व्यावसायबाट नाफा कमाउन सकिनेछ भने यात्राको तय गर्न सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगि बढ्न सकिनेछ भने माया प्रेम गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय ब्यातित गर्दा खुसि भएको महशुस गर्नेछन् । राज्यपक्षबाट पद पाईने ग्रहयोग रहेकोछ भने समाजको पक्षमा काम गर्न सक्दा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ ।
पुर्व भारतिय क्रिकेटर सुनिल गावस्कर भन्छन् : सन्दिपलाई नेपालबाट हैन भारतबाट खेलाउनु पर्छ ( भिडियो हेर्नुस )
No Comments on पुर्व भारतिय क्रिकेटर सुनिल गावस्कर भन्छन् : सन्दिपलाई नेपालबाट हैन भारतबाट खेलाउनु पर्छ ( भिडियो हेर्नुस )
काठमाडौं – भारतका लागि पहिलो विश्वकप उपाधि जिताएका सुनिल गावस्करले नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भारतबाट खेलाउन सकिने बताएका छन् । बिहीबार एक अन्तरवार्तामा बोल्ने क्रममा उनले नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई भारतीय क्रिकेट टीममा लिँदा फरक नपर्ने बताएका हुन् ।
इन्डियप्रिमियर लिग (आईपीएल) का लागि सन्दीप अहिले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) छन् । आईपीएल भोलिदेखि सुरु हुँदैछ । गावस्करले दिल्लीको टीममा यो सिजनको उपाधि उचाल्न मद्दत गर्न सक्ने क्षमता भएका स्पिनर रहेको बताएका छन् ।
‘दिल्ली क्यापिटल्ससँग धेरै क्षमता भएका स्पिनर छन् । रविन्द्र अश्विन आफ्नो अनुभवले यहाँसम्म आएका छन् । ती बाहेक लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने छन् । जसले अघिल्लो सिजन राम्रो बलिङ गरेका थिए,’ ७१ वर्षीय पूर्व क्रिकेटर तथा कमेन्टेटर गावस्करले भने ।
यही कुरालाई अगाडि तन्काउँदै उनले मजाकका रुपमा भनेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘यदि इङ्ग्ल्यान्डले स्कटल्याण्ड र आयरल्यान्डका खेलाडीलाई आफ्नो टिममा राख्न सक्छ भने भारतले किन लामिछानेजस्ता नेपाली खेलाडीलाई टिममा राख्न सक्दैन ? लामिछाने राम्रा बलिङ अलराउण्डर हुन्, उनी भारतीय रङमा सुहाउँछन् । मैले जोकका रुपमा भनेको हुँ तर भविष्यमा यी कुराबारे सोच्नपर्छ ।’
उनले सन्दीपको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनले सन्दीपले आईपीएलको तेस्रो सिजन खेलिरहँदा बलिङमा निकै धेरै विविधता ल्याएको बताएका छन् । अघिल्लो सिजनमा सन्दीपले आठ खेल खेल्दै १७.२५ को इकोनमी कायम गरेका थिए । सन्दीपले अस्ट्रेलियन बिग बास लिग, क्यारेबियन प्रिमियर लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, पाकिस्तान प्रिमियर लिग जस्ता थुप्रै फेन्चाईजीमा खेलिसकेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा आज ८५९ कोरोना संक्रमित थपिए
No Comments on काठमाडौं उपत्यकामा आज ८५९ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं-पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ८५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौंका ६९८, ललितपुरमा ७९ र भक्तपुरमा ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उपत्यकामा ८५९ सहित नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा हालसम्मकै धेरै २ हजार २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६१ हजार ५७३ पुगेको छ।